Isikhululo sikaloliwe saseParis Gare du Nord siphumile ngenxa yoloyiko lwebhombu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Isikhululo sikaloliwe saseParis Gare du Nord siphumile ngenxa yoloyiko lwebhombu
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Isikhululo sikaloliwe saseParis Gare du Nord siphumile ngenxa yoloyiko lwebhombu.
Isikhululo, esinye sezona zikhulu zaseParis ', sikwafumana uloliwe we-Eurostar osuka eLondon kwaye usebenzela isikhululo seenqwelomoya iCharles de Gaulle.
I-Gare du Nord inesikhululo sikaloliwe esisusiweyo ngenxa yomthwalo ongajongwanga.
Amakhulu abakhweli kuye kwafuneka alinde ngaphandle kwesikhululo ngoLwesithathu emva kokuba amapolisa ayalele ukuba siphume.
Iqela le-metro yaseParis lathi i-traffic kulindeleke ukuba iphinde iqalise nge-5pm ngexesha lasekhaya (3pm GMT).
Amakhulu abantu kwanyanzeleka ukuba alinde ngaphandle IGare du Nord isikhululo sikaloliwe embindini Paris namhlanje emva kokuba amapolisa ayalele ukuba ikhutshwe, ngelixa iqela labaqhushumbisi beliphanda ngento ekukholelwa ukuba ayijongwanga.
The IGare du Nord, ngokusemthethweni iParis-Nord, enye yezikhululo ezintandathu zesikhululo sikaloliwe esikhulu kwi Paris, ikhutshiwe ngenxa yesongelo sebhombu enokwenzeka kunye nokuhamba koololiwe ukusuka kwi-terminal kuye kwamiswa.
I-Transport Express yeNgingqi (TER) ibhale kuTwitter ukuba izithuthi ezisuka kwisikhululo ziphazamisekile, ngelixa inkampani eqhuba iParis Metro ichaza ukuba oololiwe bebengahambi kulo naliphi na icala phakathi kweParis Gare de Lyon neParis Nord.
Iqela le-metro yaseParis lathi i-traffic kulindeleke ukuba iphinde iqale ngentsimbi ye-5pm ngexesha lasekhaya (3pm GMT) kwaye yaqinisekisa ukuba isiganeko sasinxulumene nento yomthwalo ongajongwanga.
Isikhululo, enye ye Paris's inkulu, kwakhona ufumana uloliwe Eurostar evela London kwaye ukhonza Charles de Gaulle Airport.
Iifoto kunye neefoto ezivela ngaphandle kwesikhululo zibonisa izihlwele ezikhulu zabantu ezilinde kwizitrato ze-10 ze-Paris ze-arrondissement ecacileyo. Abanye kuTwitter baqinisekisile ukuba iqela lebhombu lifikile esitishini.